Ukumelana ne-UE Wonderboom 2, okunamandla nangemodi entsha ye-Outdoor Boost | Izindaba zamagajethi
UJordi Gimenez | | Izipikha
Uma kunenkampani yesikhulisa-zwi elungele ukulwa ezindaweni "ezinobutha" njengezintaba noma ulwandle manje njengoba isimo sezulu esihle sisondela, akungabazeki ukuthi yiWonderboom leyo. Kulokhu, inkampani iveza imodeli yayo entsha yeWonderboom, i-Wonderboom 2.
Njengoba ukwazi ukufunda esihlokweni, iWonderboom 2 entsha isinikeza ukumelana okukhulu nokushaqeka, amanzi nothuli, futhi inamandla athe xaxa kunemodeli yangaphambilini futhi ingeza imodi entsha umsindo othuthuka ngayo ezikhathini esizithola kude nasekhaya futhi siyiphatha nathi, yilokhu okwenzelwe lokhu isipikha esisha, esincane futhi esinamandla esisayinwe ngu-Ultimate Ears.
Thenga lapha iWonderboom 2 yakho ngombala owufunayo
1 Ukuthuthukiswa kobuhle kuqhathaniswa nemodeli yangaphambilini
2 Yini imodi yokukhuthaza yangaphandle yale Wonderboom 2 entsha?
3 Ukumelana namanzi, ukuntanta futhi kumelane namaqhubu
4 Ikhwalithi yomsindo yalesi sipikha esisha
5 Ukuzimela okuthuthukisiwe eWonderboom 2 entsha
6 Intengo yeWonderboom 2, imibala nokutholakala
7 Umbono woMhleli
Ukuthuthukiswa kobuhle kuqhathaniswa nemodeli yangaphambilini
Kulokhu singasho ukuthi zombili izipikha, iWonderboom neWonderboom 2 ziyefana ngokuya ngomklamo nezinkinobho zezici zokukhulisa noma ukunciphisa ivolumu. Kepha kule nguqulo yesibili inkampani igcizelela ngokukhethekile thuthukisa indwangu yangaphandle yezipikha lokho kuzenza zikwazi ukumelana ngokwengeziwe futhi zinikeze isitayela esihluke kancane kwiWonderboom 2 lapho sinaso eduze kwemodeli yangaphambilini.
Olunye ushintsho esilubonayo ekuboneni kokuqala kuyacaca ukuthi yireyipu lesi sikhulumi esingaxhonywa ngaso noma kuphi. Kule Wonderboom 2 entsha ngikhulise futhi ngashintsha ukwakheka kwezintambo kokukwazi ukunwebeka lapho kuvela khona uphawu lwesiginesha. Konke lokhu kwenza ezokuthutha zibe ngcono kakhulu kule modeli futhi futhi ziphephe. Ngokomzimba zingabonakala zifana, kepha empeleni zingamamodeli anokuhluka okumbalwa kanti enye yazo inkinobho engezansi esebenzisa imodi entsha ye-Outdoor Boost, esizokhuluma ngayo njengamanje.
Yini imodi yokukhuthaza yangaphandle yale Wonderboom 2 entsha?
Okwenza ngempela le Wonderboom 2 yehluke yilokhu imodi entsha ye-Outdoor Boost. Lesi isici esisha esenza ukuthi abasebenzisi babe nokuhlangenwe nakho okungcono komsindo kunoma iyiphi indawo yangaphandle njengoba umsindo ucaca futhi uzwakala kakhulu. Konke lokhu kulungiswa yisipika uqobo ngakho umsebenzisi umane akhethe phakathi kokusebenzisa le modi noma cha.
Ukwenza kusebenze le Outdoor Boost kufanele simane sikwenze cindezela ezansi kwesipikha kunkinobho enesithombe somuthi wepayipi. Njengoba isikhulu esiphezulu se-Ultimate Ears uCharlotte Johs echazile, bawuthuthukisile umsindo ongu-360 ° noma ucace kahle ngaphandle futhi isipiliyoni sesitiriyo sesingokoqobo:
? Siqhubekele phambili nomculo, sinezici ezintsha zomsindo ezijwayela indawo engaphandle nekhono lokuzwa umsindo wangempela wesitiriyo lapho izikhulumi ezimbili zeWonderboom 2 zihlanganiswa ngasikhathi sinye. Manje umsebenzisi angathatha umculo noma yikuphi futhi ajabulele umsindo ocacile ongu-360 kunoma yisiphi isimo usuku lonke.?
Ngempumelelo manje iWonderboom 2 entsha ingavunyelaniswa futhi empeleni ikhiphe umsindo wesitiriyo lapho sinezipika ezimbili. Ngalo mqondo, ukukwazi ukujabulela ikhwalithi yomsindo wezipikha ezimbili ezivumelanisiwe ze-Wonderboom 2 kuyamangalisa ngempela, noma ngabe kokuqukethwe kwe-multimedia noma umculo wethu esiwuthandayo.
Ukumelana namanzi, ukuntanta futhi kumelane namaqhubu
Bekungeke kube ngenye indlela futhi lokho kungenxa yokuthi iWonderboom ibonakaliswa ukumelana kakhulu nokushaqeka futhi iphelele ukuyiyisa ebhishi, ezintabeni noma kuphi ngaphandle kokukhathazeka. Esethulweni kwathiwa isivivinyo esihle kakhulu kunoma iyiphi idivayisi ukushiyela ingane futhi singasho ukuthi babambelela kahle kakhulu. Kepha into esemqoka yale Wonderboom 2 entsha ukuthi ayakwazi ukumelana namanzi ngesitifiketi se-IP67, ngakho-ke zimelana nengxenye yehora emanzini ngaphansi kwemitha elilodwa ngokuphelele.
Futhi yebo, iWonderboom 2 entsha ine-booyancy ekhangayo ngakho-ke ungakhathazeki uma iwela echibini. Ngakho-ke asisenazo izaba zokuthi thatha lezi zipika uziyise olwandle noma echibini futhi ujabulele umculo wethu noma kuphi.
Ikhwalithi yomsindo yalesi sipikha esisha
Singena kulokho okubaluleke kakhulu futhi kuyikhwalithi yomsindo namandla alezi zikhulumi ezintsha. Singasho ukuthi ngalo mqondo i-Ultimate Ears ingenye yezinkampani ezenza kahle kakhulu lo msebenzi wokwengeza amandla kuzipikha zazo kanti iWonderboom 2 ngeke ikudumaze kulokhu. Amandla aso ahlaba umxhwele ngempela ngokuthi sincane kangakanani lesi sikhulumi ngokobukhulu, ubukhulu obucishe buqine kunemodeli yangaphambilini kepha abuhlukile ekuqaleni: 10,4 x 9,5 x 9,5 cm no-422 g
Ukukhetha kwe Ukubhangqa kwesitiriyo esiphindwe kabili Inikeza lawa maWonderboom 2 elinye ibanga futhi ukuthi afike ahlome ngamabhasi amaningi ngenxa yemvamisa ye-cutoff ephansi, ngakho-ke ikhwalithi yomsindo abayikhiphayo ithuthuka kakhulu futhi uma uhlanganisa amabili iyamangalisa impela. Izinga lomsindo lalezi zipikha alikhohlisi futhi singaqiniseka lapho silithenga uma sifuna ukulalela umculo osezingeni.
I-Ultimate Ears iguqula indlela abantu abathola ngayo umculo weqembu, noma ngabe bakuphi. Kumvelaphi wayo, i-Ultimate Ears iqale yaguqula indlela abaculi abaxhumana ngayo nezethameli zekhonsathi yabo ngokufaka kabusha i-monitor esiteji, bayenze i-headset yangokwezifiso. Namuhla, i-Ultimate Ears, uphawu lweLogitech International, iyaqhubeka nokwenza umculo uphile.
Ukuzimela okuthuthukisiwe eWonderboom 2 entsha
Ibhethri lale Wonderboom 2 entsha liyakwazi ukuyibamba ngevolumu ephakathi cishe amahora ayi-13 ngokusho komkhiqizi. Esimweni sethu asisibalanga ngempela isikhathi esidlulile selokhu senza inkokhiso yokuqala yafika ezingeni eliphezulu, kepha lawo mahora ayi-13 angaphezulu kakhulu uma singenayo njalo ivolumu yesipika ophahleni. Lokhu ngokusobala kuyathuthuka kumodeli yangaphambilini yokuthi, yize kuyiqiniso ukuthi ibinokuzimela okuhle, imodeli entsha iyakudlula.
Thenga iWonderboom 2 entsha manje
Intengo yeWonderboom 2, imibala nokutholakala
Intengo yalezi zinhlobo ezintsha zeWonderboom 2 imakwe kuma-99,99 euros ngakho-ke intengo yemodeli yangaphambilini iyalingana ngesikhathi sethulwa. Isipikha esingabizi esivele sitholakalela ukuthengwa ezweni lethu kusuka kuwebhusayithi ye-Ultimate Ears.
Mayelana nemibala etholakalayo, imodeli entsha yefemu inemibala emihlanu etholakalayo: IDear Space Emnyama (Emnyama), Iqhwa Elichotshoziwe (Okumpunga), Okubomvu Okukhulu (Okubomvu), iBermuda Blue (Luhlaza okwesibhakabhaka) kanye ne-Just Peach (Pink). Lezi zokugcina zizotholakala ukudayiswa kusukela ekupheleni kukaJulayi ngakho-ke ukuphela kwento esele ebekiwe, okusele sekuvele kungathengwa.
I-Ultimate Ears Wonderboom 2
Izinto zokwakha nokukhiqiza
Ikhwalithi yomsindo namandla
Ukushaqeka nokumelana namanzi
Ayifaki ukushaja okungenantambo njengomfowabo omkhulu
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Izipikha » Sivivinye i-UE Wonderboom 2. entsha enamandla, enamandla amakhulu nangemodi entsha ye-Outdoor Boost
Ungabhalisa kanjani ku-Instagram